Saladin - Hero Hero - Salah Ad-din Yusuf Ibn Ayyub
Ijoni yamaSilamsi yeNkqubela yesiThathu
I-Saladin yaziwa nangokuthi:
Al-malik An-nasir Salah Ad-din Yusuf I. "Saladin" yintshona yeSalah Ad-din Yusuf Ibn Ayyub.
Saladin yaziwa ngokuba:
ukusekela ubukhosi bama-Ayyubid nokuthatha iYerusalem ukusuka kumaKristu. Wayeyindoda eyaziwayo kakhulu yamaSilamsi kunye nezobugcisa bezempi.
Iindawo zokuhlala kunye nefuthe:
Ozelwe: c. 1137
Ukutshatyalaliswa eHattin: NgoJulayi 4, 1187
IJerusalem ephinda yabuyiselwa: Oktoti 2 , 1187
Wafa: Matshi 4, 1193
USaladin wazalelwa kwintsapho yaseKrishi eTikrit kwaye wakhulela eBabbek naseDamasko. Waqala umsebenzi wakhe wempi ngokujoyina abasebenzi baka-Asad ud-Din Shirkuh, umlawuli obalulekileyo. Ngo-1169, eneminyaka engama-31 ubudala, wayemiselwe ukuba abe ngumlindi waseFatimid eYiputa kunye nomlawuli wamasosha aseSiriya apho.
Ngo-1171, uSaladin wayichitha umkhawulo wamaShiyiti waza wamemezela ukubuyela kwiSunni Islam eYiputa, ngoko waba ngumlawuli wedwa welizwe. Ngo-1187 wathatha ubuBukumkani beCalatin Crusader, kwaye ngoJulayi 4 waloo nyaka wazuza ukunqoba okunzima kwi -Battle of Hattin . Ngo-Oktobha 2, iYerusalem yazinikela. Ukubuyisa umzi, uSaladin kunye nemikhosi yakhe yaziphatha ngokuzimela ngokubanzi olwahluke ngokukodwa kunye nezenzo zamagazi ezintshonalanga zatsho amashumi asibhozo ngaphambili.
Nangona kunjalo, nangona uSaladin wakwazi ukunciphisa inani leedolophu eziqhutywe yiNkqantosi ukuya kwiintathu, wahluleka ukuthabatha inqaba yeNxweme yaseTire.
Amaxhoba amaninzi amaKristu kwimfazwe yakutshanje aphephela apho, kwaye yayiza kuba yingcambu yokuhlaselwa kweCrossuser. Ukuphindwa kweYerusalem kwakunqabileyo kwiNgqobhoko, kwaye umphumo waba ukuqaliswa kweNkqubela yesithathu.
Ngaphezulu kwekhosi yesithathu yokulwa, iSaladin yakwazi ukugcina amaqhawe amakhulu eNtshona ukuba enze naluphi na uphuhliso olubalulekileyo (kuquka i-Crusader ephawulekayo, uRichard the Lionheart ).
Ngelo xesha ukulwa kwagqitywa ngo-1192, abaPhuloli beNkqubela bahlala kwintsimi encinane kwiLevantine.
Kodwa iminyaka yokulwa yayithathile, kwaye uSadidin wafa ngo-1193. Kulo lonke ubomi bakhe wayebonise ukungabi nantoni kokuzenzela kwaye wayenomdla ngobutyebi bakhe; ekufeni kwakhe abahlobo bakhe bafumanisa ukuba akayikushiya imali yokuhlawula ukungcwaba kwakhe. Inzala kaSaladin yayiza kuba ngukumkani njengama-Ayyubid kuze kube yilapho ixhaswa kumaMamluk ngo-1250.
Olongezelelweyo lweSaldin Resources:
Ii-biographies, iimithombo eziphambili, iimviwo zemisebenzi yamajoni kaSaladin kunye neencwadi zabafundi abasebancinci.
IiWebhsayithi ezinika ulwazi oluthile kwiqhawe lamaSilamsi nemvelaphi kwiimeko kwiLizwe elingcwele ngexesha lokuphila kwakhe.
Inkcazo ngoBuchule, Impumelelo, okanye iNdima kuMbutho
Isicatshulwa salolu xwebhu yi-copyright © 2004-2015 Melissa Snell. Ungayilanda okanye uprinte le dokhumenti ngokusetyenziswa kobuqu okanye esikolweni, nje kuphela i-URL engezantsi ifakiwe. Imvume ayinikezelwa ukuvelisa eli xwebhu kwenye iwebhusayithi. Ukukhuphela imvume, nceda uqhagamshelane noMelissa Snell.
I-URL yale dokhumenti yile:
I-Biography yeJim Jones kunye neThe Peoples Temple
IQumrhu likaStalin lisuswa kwiTombeni likaLenin
UPapa Urban II
Ukuphakama nokuwa kweBall Berlin
Idilesi yentetho (ulwimi)
Ukuhlela iiSpredishithi ze-Excel kunye neDelphi ne-ADO
Imithi yeKrismesi yaba yiNkcubeko kwiXesha lama-19
Yintoni i-Grassroots Lobbying?
UScott Joplin: uKumkani weRaptime
Umgca we-Skate Brands
IiKomiti zeeSeti zisebenza njani?
Ukungafani phakathi kweeNkcazo kunye neziNqanaba